Human Rights Watch oo eedeysay maxkamada ciidamada Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee “Human Rights Watch”, ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in maxkamadda ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya ay tan iyo sanadkii 2011-kii ay xukun ku riday boqollaal qof, kuwaas oo aysan sharciyad u lahayn maxkamadeyntooda, amaba ay si ka hooseysa xeerka caalamiga ee dacwad qaadida u xukuntay.
Warbixin ka kooban 33 bog oo ay soo saartay HRW ayaa waxay ku dhaliishay hanaanka ay xukunada u fuliso maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaliya oo ay sheegtay inay fuliso xukuno aan cadaalad ahayn.
Warbixintaan waxaa lagu sheegay in hay’adda oo la kulantay sodomeeyo ruux oo qaarkood ehelkooda ay maxkamadu xukuntay ay ku ogaatay in xataa dadka ay xukunto maxkamadu qarenadda u dooda aysan helin fursad ay ugu doodaan eedaysanayaasha ay difaacayaan.
Human Rights Watch waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2011 ay maxkamada ciidamada Soomaaluiya fulisay boqolaal xukun oo aan cadaalad aheyn habka loo marayna uu deg deg ku jiray.
Sanadkii lasoo dhaafay in ka badan 10 ruux ayay hay’addu sheegtay inay xukun dil ah riday oo qaarkoodna la dilay taasoo hay’addu sheegtay inay dhaawac ku tahay xeerka aas aasiga ah ee xaquuqda aadanaha.
Maxkamada ayay hay’addu sheegtay inay qaado dacwado loo haysto askar
ciidamada dawlada ka tirsan iyo dadka lagu tuhmo inay Shabab ka tirsan waxaana ay talo ahaan usoo jeedinaysaa in kiisaska shaqsiyaadka aan cidamada ka tirsanayn loo wareejiyo maxkamadaha rayidka ah.
“Dhagaysiga dacwadaha loo haysto eedeysanayaasha waa inay ahaadaan kuwo lagu kalsoonaan karo qareenaddana fursad la siiyo si looga hor tago dhibaateynta xaquuqal Isnaanka. Waxaa sidaas yiri ku xigeenka agaasimaha hay’adda Human Rights Watch ee Africa haweeneyda la yiraahdo Leslie Lefkow, waxaana ay intaa ku dartay in Soomaaliya ay u baahan tahay dib u qaabeyn lagu sameeyo maxkamada ciidamada.
Leslie Lefkow, waxay xustay in inkastoo ay waqti qaadanayso dhisida hanaanka garsoorka dalka haddana loo baahanyahay in dhagaysiga kiisaska shacabka loo baahanyahay inay qaadaan maxkamadaha rayidka maxkamada ciidamadana ay qaado eedaha ciidamada loo haysto oo kaliya.
Warbixinta oo soo xiganaysa qareen Soomaaliyeed ayaa waxay sheegtay in gudoonka maxkamada ciidamada ay aaminsan yihiin inay yihiin kuwo awood leh oo ay adag tahay in racfaan laga qaato xukun ay rideen.
Dhanka kale, waxaa arintaan ka jawaabay Guddoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yaroow oo la hadlay Idaacada BBC-da, isaga oo difaacay go’aanada ay maxkamada ciidanka xukunada ugu rido askarta iyo wadooyinka loo maro.
Liibaan Cali Yaroow ayaa tibaaxay in Xukunada ay fuliyaan ay dadka ka hor Xukunada uqabtaan Qareeno maxkamadana kuwii cadeymo ku heshana ay xukunka ku fuliso isagoona warbixinta Hay’adaasi kasoo baxday ku tilmaamay mid lagu doonayo in lagu bur buriyo ama lagu aflagaadeeyo hanaanka ay ku shaqeyso maxkamada ciidamada.
Human Rights Watch ayaa hay’ad aan dowli aheyn, islamarkaana u dooda xuquuqda aadana, waxaana fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Waxey hay’addaani xafiisyo ku leedahay magaalooyinka Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, & Washington D.C